Mind Defense - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
လူတှမှော စိတျဝဒေနာ အနညျးနဲ့ အမြားတော့ ရှိကွပါတယျ
အဲဒီလိုပွောရငျ လူတိုငျး ရူးနတောလို့ ပွောတာလား
ပုထုဇ်ဇနော ဥမ်မတ်တကော တဲ့လေ
အောကျပါ အခကျြကလေးမြားကို လုပျနတောကိုက ကြှနျုပျတို့ စိတျဝဒေနာ ကနေ စိတျရောဂါ မခံစားရအောငျ လုပျပေးနတောပါပဲ
ဒါကို စိတျပိုငျးဆိုငျရာ ခုခံမှုတှလေုိ့ ဆေးပညာအရ ချေါပါတယျ
ကိုယျ ဘယျနှဈခု လုပျဖွဈနသေလဲ? တိုကျကွညျ့ရအောငျလား
၁။ ဒုက်ခတှေ အရမျး တှကွေုံ့ရလို့ မိမိ စိတျနစေိတျထား ပွောငျးလဲသှားတာဟာလညျး စိတျထိခိုကျမှုကို ပွသပါတယျ။ ဥပမာ- မိမိ မိသားစုဝငျတဈဦး ဆုံးရှုံးသှားလို့ စိတျထိခိုကျပွီး နထေိုငျမှု ပွောငျးသှားတာမြိုးပါ။ ဒါဟာ စိတျရောဂါ ရတဲ့ထိ မဖွဈအောငျ ခန်ဓာကိုယျက တားတဲ့ ခုခံမှု တဈခုပါပဲ
၂။ ကိနျးဂဏနျး အခကျြအလကျတှနေဲ့ ပွောရငျ ဖွသောတာ။
ဥပမာ- ကိုယျ စာမေးပှဲကလြို့ စိတျမကောငျးပမေယျ့ အခနျးရဲ့ သုံးပုံတဈပုံ ကတြယျဆို ကိုယျမအောငျတာ ဖွသောတာမြိုးပါ။ ဒါကွောငျ့ မုနျတိုငျးကွောငျ့ ပကျြစီးမှု ခံရတာမြိုး လိုဆိုရငျ တဈနယျလုံး ဖွဈတာပါပဲလေ။ ငါ့မိသားစုပဲ မဟုတျပါဘူးဆိုတဲ့ ဒီခုခံမှုလေးက လူကို ရူးမသှားစတောပါ။
၃။ မကောငျးမှု လုပျမိတာတှေ နောငျတရပွီး ကောငျးတာလေးတှေ ပွနျလုပျတာ
ဥပမာ- ရှေးခတျေကလို မငျးမိနျ့နဲ့ ကှပျမကျြပွီးမှ အပိုငျစားပေးတာမြိုး၊ ညီတျော နောငျတျော ခမညျးတျောတှကေို လုပျကွံနနျးတကျပွီးမှ သူတို့ကုသိုလျရအောငျ ဘုရားတညျပေးတယျ ဆိုတာမြိုးတှပေါ
ဒါ ကနျြရဈသူအတှကျ စိတျသကျသာအောငျ လုပျတာပါပဲ။ မဟုတျရငျ တဈသကျလုံး နောငျတစိတျက ဖိစီးလို့ တဈနေ့ ရူးမှာပါပဲ
၄။ ကိုယျ မလုပျနိုငျတာ တဈခုကို မပွေိ့း လုပျနိုငျတာလေး စဉျးစားဖွသေိမျ့တာ
ဥပမာ- စာမတျောတဲ့ သူတဈယောကျက ငါမှစာမတျောတာ၊ ပနျးခြီပဲ ဆှဲတော့မယျ ဆိုပွီး လိုငျးပွောငျးတာမြိုးပါ
ခန်ဓာကိုယျဟာ မိမိတိုးတကျရေးအတှကျ လုပျသငျ့တဲ့ ခုခံမှုလေးတှေ လုပျပေးတယျဆိုတာ ဒါနဲ့တငျ သိရပါတယျ။ ကိုယျမရနိုငျတာမှာ တှယျကပျနရေငျ တဈခြိနျကြ အလိုမပွညျ့မှုတှနေဲ့ ရူးမယျ့ရနျကို ကာကှယျထားတာပါ
၅။ ခံစားခကျြတှကေို အတငျးမြိုသိပျလိုကျတာ
ဒီခုခံမှုက အဆိုးဆုံးပါပဲ အခနျ့မသငျ့ရငျ ပေါကျထှကျပွီး စိတျဝဒေနာအပြော့စား ရတတျပါတယျ
၆။ ဖွဈရပျမှနျကို မသိစိတျက လိမျညာတာ
ဥပမာ- အရမျးခဈြတဲ့သူ ဆုံးပါးသှားပမေယျ့ သူရှိနစေဉျအတိုငျး ပွုမူပွောဆိုနတော
ဒါမြိုးက လူတိုငျး ခဏတော့ ဖွဈတတျကွပါတယျ။ သှားလသေူရဲ့ အကြီလေးတှေ သိမျးထားတာ၊ သူ့နာမညျလေး ရေးစရာကွုံလာရငျ ကှယျလှနျကွောငျးပွတဲ့ (…)လေးထဲ မထညျ့ခငျြတာ။ ဒါလောကျဆို မဆိုးလှပမေယျ့ သူ နထေိုငျစဉျကအတိုငျး တဈယောကျတညျး စကားတှပွေောနတေဲ့ထိဆိုရငျတော့ အခွအေနေ မလှဘူးပေါ့
၇။ နိုငျတဲ့သူကို ထောငျးတာ၊ မိမိ စိတျဒဏျရာကို သူတဈပါးအပျေါ မဲတာ၊ သူတဈပါးကို အပွဈပုံခတြာ
မြားသောအားဖွငျ့ (ကနျတော့နျော) မိဘတှေ လုပျလရှေိ့ပါတယျ။
ဟဲ့ နငျ စာမကကျြဘူးလား၊ အမှတျမမီလို ဘယျကြောငျး ပွုတျခငျြလား ဆိုတာ တကယျတော့ မြားသောအားဖွငျ့ သူတို့ ငယျစဉျက အမှတျမမီလို့ ပွုတျခဲ့ရတဲ့ စိတျဒဏျရာကွောငျ့ ပွနျဖွဈလာတဲ့ ခံစားခကျြပါ။
၈။ ကလေးလို ခဏပွနျဖွဈသှားတာ
မြားသောအားဖွငျ့ အသကျအရှယျ အလှနျကွီးရငျ့တဲ့ အဖိုးအဖှားတှေ အထီးကနျြတဲ့အခါမြိုး၊ နောကျတဈခုက နာတာရှညျ ဖွဈလာတဲ့ လူမြိုးတှမှော တှရေ့ပါတယျ
အမှနျက ရငျထဲမှာ ဖုံးကှယျထားတဲ့ ဝမျးနညျးမှု ပူပနျမှုတှကွေောငျ့ စိတျထဲ တနျပွနျမှုလေးတှေ ပျေါလာတာပါပဲ
၉။ လကျမခံနိုငျတဲ့ အာရုံကို တှနျးအားအဖွဈ အသုံးပွုတာ
ဒါလေးက ခုခံမှုတှထေဲက အဆငျ့အတနျးမွငျ့ပွီး အကြိုးရှိတဲ့ ခုခံမှုလေးပါပဲ
ဒေါသထှကျလို့ အလုပျကြုံးလုပျတာမြိုး၊ မကောငျးတဲ့စိတျ ပျေါလာရငျ ကောငျးတာလေးနဲ့ ပွောငျးတာတို့ဆိုတာ ဒီခုခံမှုပါပဲ
ဒီ ခုခံမှုလေးက အကောငျးဆုံးပါပဲ။ ဒါလေးသာ စိတျထဲ မပျေါရငျ ဘဝမှာ နပြေျောကွတော့မှာ မဟုတျပါဘူး
၁၀။ လောကဒဏျ အဆိုးတှကေို ရယျမောနိုငျတာ
ဒုက်ခသုက်ခထဲမှာတငျ ရယျနိုငျနပွေီဆိုရငျတော့ သငျဟာ စိတျခုခံမှု အဆငျ့အတျောမွငျ့တဲ့သူလို့ ဆိုလို့ရပါတယျ
သငျရော ဘယျအမြိုးအစား ခုခံမှုတှေ ရှိသလဲ?
ဒေါကျတာယမငျး (ဆေး ၂)
လူတွေမှာ စိတ်ဝေဒနာ အနည်းနဲ့ အများတော့ ရှိကြပါတယ်
အဲဒီလိုပြောရင် လူတိုင်း ရူးနေတာလို့ ပြောတာလား
ပုထုဇ္ဇနော ဥမ္မတ္တကော တဲ့လေ
အောက်ပါ အချက်ကလေးများကို လုပ်နေတာကိုက ကျွန်ုပ်တို့ စိတ်ဝေဒနာ ကနေ စိတ်ရောဂါ မခံစားရအောင် လုပ်ပေးနေတာပါပဲ
ဒါကို စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခုခံမှုတွေလုိ့ ဆေးပညာအရ ခေါ်ပါတယ်
ကိုယ် ဘယ်နှစ်ခု လုပ်ဖြစ်နေသလဲ? တိုက်ကြည့်ရအောင်လား
၁။ ဒုက္ခတွေ အရမ်း တွေ့ကြုံရလို့ မိမိ စိတ်နေစိတ်ထား ပြောင်းလဲသွားတာဟာလည်း စိတ်ထိခိုက်မှုကို ပြသပါတယ်။ ဥပမာ- မိမိ မိသားစုဝင်တစ်ဦး ဆုံးရှုံးသွားလို့ စိတ်ထိခိုက်ပြီး နေထိုင်မှု ပြောင်းသွားတာမျိုးပါ။ ဒါဟာ စိတ်ရောဂါ ရတဲ့ထိ မဖြစ်အောင် ခန္ဓာကိုယ်က တားတဲ့ ခုခံမှု တစ်ခုပါပဲ
၂။ ကိန်းဂဏန်း အချက်အလက်တွေနဲ့ ပြောရင် ဖြေသာတာ။
ဥပမာ- ကိုယ် စာမေးပွဲကျလို့ စိတ်မကောင်းပေမယ့် အခန်းရဲ့ သုံးပုံတစ်ပုံ ကျတယ်ဆို ကိုယ်မအောင်တာ ဖြေသာတာမျိုးပါ။ ဒါကြောင့် မုန်တိုင်းကြောင့် ပျက်စီးမှု ခံရတာမျိုး လိုဆိုရင် တစ်နယ်လုံး ဖြစ်တာပါပဲလေ။ ငါ့မိသားစုပဲ မဟုတ်ပါဘူးဆိုတဲ့ ဒီခုခံမှုလေးက လူကို ရူးမသွားစေတာပါ။
၃။ မကောင်းမှု လုပ်မိတာတွေ နောင်တရပြီး ကောင်းတာလေးတွေ ပြန်လုပ်တာ
ဥပမာ- ရှေးခေတ်ကလို မင်းမိန့်နဲ့ ကွပ်မျက်ပြီးမှ အပိုင်စားပေးတာမျိုး၊ ညီတော် နောင်တော် ခမည်းတော်တွေကို လုပ်ကြံနန်းတက်ပြီးမှ သူတို့ကုသိုလ်ရအောင် ဘုရားတည်ပေးတယ် ဆိုတာမျိုးတွေပါ
ဒါ ကျန်ရစ်သူအတွက် စိတ်သက်သာအောင် လုပ်တာပါပဲ။ မဟုတ်ရင် တစ်သက်လုံး နောင်တစိတ်က ဖိစီးလို့ တစ်နေ့ ရူးမှာပါပဲ
၄။ ကိုယ် မလုပ်နိုင်တာ တစ်ခုကို မေ့ပြိး လုပ်နိုင်တာလေး စဉ်းစားဖြေသိမ့်တာ
ဥပမာ- စာမတော်တဲ့ သူတစ်ယောက်က ငါမှစာမတော်တာ၊ ပန်းချီပဲ ဆွဲတော့မယ် ဆိုပြီး လိုင်းပြောင်းတာမျိုးပါ
ခန္ဓာကိုယ်ဟာ မိမိတိုးတက်ရေးအတွက် လုပ်သင့်တဲ့ ခုခံမှုလေးတွေ လုပ်ပေးတယ်ဆိုတာ ဒါနဲ့တင် သိရပါတယ်။ ကိုယ်မရနိုင်တာမှာ တွယ်ကပ်နေရင် တစ်ချိန်ကျ အလိုမပြည့်မှုတွေနဲ့ ရူးမယ့်ရန်ကို ကာကွယ်ထားတာပါ
၅။ ခံစားချက်တွေကို အတင်းမျိုသ်ိပ်လိုက်တာ
ဒီခုခံမှုက အဆိုးဆုံးပါပဲ အခန့်မသင့်ရင် ပေါက်ထွက်ပြီး စိတ်ဝေဒနာအပျော့စား ရတတ်ပါတယ်
၆။ ဖြစ်ရပ်မှန်ကို မသိစိတ်က လိမ်ညာတာ
ဥပမာ- အရမ်းချစ်တဲ့သူ ဆုံးပါးသွားပေမယ့် သူရှိနေစဉ်အတိုင်း ပြုမူပြောဆိုနေတာ
ဒါမျိုးက လူတိုင်း ခဏတော့ ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။ သွားလေသူရဲ့ အကျီလေးတွေ သိမ်းထားတာ၊ သူ့နာမည်လေး ရေးစရာကြုံလာရင် ကွယ်လွန်ကြောင်းပြတဲ့ (…)လေးထဲ မထည့်ချင်တာ။ ဒါလောက်ဆို မဆိုးလှပေမယ့် သူ နေထိုင်စဉ်ကအတိုင်း တစ်ယောက်တည်း စကားတွေပြောနေတဲ့ထိဆိုရင်တော့ အခြေအနေ မလှဘူးပေါ့
၇။ နိုင်တဲ့သူကို ထောင်းတာ၊ မိမိ စိတ်ဒဏ်ရာကို သူတစ်ပါးအပေါ် မဲတာ၊ သူတစ်ပါးကို အပြစ်ပုံချတာ
များသောအားဖြင့် (ကန်တော့နော်) မိဘတွေ လုပ်လေ့ရှိပါတယ်။
ဟဲ့ နင် စာမကျက်ဘူးလား၊ အမှတ်မမီလို ဘယ်ကျောင်း ပြုတ်ချင်လား ဆိုတာ တကယ်တော့ များသောအားဖြင့် သူတို့ ငယ်စဉ်က အမှတ်မမီလို့ ပြုတ်ခဲ့ရတဲ့ စိတ်ဒဏ်ရာကြောင့် ပြန်ဖြစ်လာတဲ့ ခံစားချက်ပါ။
၈။ ကလေးလို ခဏပြန်ဖြစ်သွားတာ
များသောအားဖြင့် အသက်အရွယ် အလွန်ကြီးရင့်တဲ့ အဖိုးအဖွားတွေ အထီးကျန်တဲ့အခါမျိုး၊ နောက်တစ်ခုက နာတာရှည် ဖြစ်လာတဲ့ လူမျိုးတွေမှာ တွေ့ရပါတယ်
အမှန်က ရင်ထဲမှာ ဖုံးကွယ်ထားတဲ့ ဝမ်းနည်းမှု ပူပန်မှုတွေကြောင့် စိတ်ထဲ တန်ပြန်မှုလေးတွေ ပေါ်လာတာပါပဲ
၉။ လက်မခံနိုင်တဲ့ အာရုံကို တွန်းအားအဖြစ် အသုံးပြုတာ
ဒါလေးက ခုခံမှုတွေထဲက အဆင့်အတန်းမြင့်ပြီး အကျိုးရှိတဲ့ ခုခံမှုလေးပါပဲ
ဒေါသထွက်လို့ အလုပ်ကျုံးလုပ်တာမျိုး၊ မကောင်းတဲ့စိတ် ပေါ်လာရင် ကောင်းတာလေးနဲ့ ပြောင်းတာတို့ဆိုတာ ဒီခုခံမှုပါပဲ
ဒီ ခုခံမှုလေးက အကောင်းဆုံးပါပဲ။ ဒါလေးသာ စိတ်ထဲ မပေါ်ရင် ဘဝမှာ နေပျော်ကြတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး
၁၀။ လောကဒဏ် အဆိုးတွေကို ရယ်မောနိုင်တာ
ဒုက္ခသုက္ခထဲမှာတင် ရယ်နိုင်နေပြီဆိုရင်တော့ သင်ဟာ စိတ်ခုခံမှု အဆင့်အတော်မြင့်တဲ့သူလို့ ဆိုလို့ရပါတယ်
သင်ရော ဘယ်အမျိုးအစား ခုခံမှုတွေ ရှိသလဲ?
ဒေါက်တာယမင်း (ဆေး ၂)